Inkukhu yokukhusela i-Pox iphikisiwe China Manufacturer
Inkukhu i-Pox iphelile iiMveliso eziPhezulu,Iimveliso zeMvelo ziphelile iiMveliso eziPhezulu,I-Pox Pox Intenuated Potency High
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Inkukhu i-Pox iphelile iiMveliso eziPhezulu,Iimveliso zeMvelo ziphelile iiMveliso eziPhezulu,I-Pox Pox Intenuated Potency High
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo > Inkukhu yokukhusela i-Pox iphikisiwe
Inkukhu yokukhusela i-Pox iphikisiwe
 Inkukhu yokukhusela i-Pox iphikisiwe
Iigonti zingaphinda zibe neendlela zokukhusela ukungcola ngebhaktheriya okanye isikhunta . Kuze kube yiminyaka yamuva nje, isithwathwa sokugcina isilondolozi sasisetyenziselwa ezininzi izitofu ezingenayo igciwane eliphilayo. Ngomnyaka ka-2005, ukuphela kokugonywa kwabantwana e-US okuqukethe i-thimerosal inkulu kunomlinganiselo wendlela yokugonywa ngumkhuhlane,  okwangoku kunconywa kuphela kubantwana abaneengxaki ezithile.  Izitofu zokugonya ezine-single-dose zonyango ezinikezelwe e-UK azinalo i-thiomersal (igama layo lase-UK) kwiimveliso. Iindleko zokulondoloza zingasetyenziselwa kwizigaba ezahlukahlukeneyo zokuveliswa kweigonyi, kwaye iindlela eziphambili zokulinganisa zingabonakalisa umkhondo wazo kumveliso ogqityiweyo, njengoko zinokusingqongileyo kunye noluntu ngokubanzi. 
Related Products List: Inkukhu i-Pox iphelile iiMveliso eziPhezulu , Iimveliso zeMvelo ziphelile iiMveliso eziPhezulu , I-Pox Pox Intenuated Potency High , I-Chicken Pox iphelile iiMveliso ze-Bioproducts , Iimveliso zeeMveliso eziMgangatho oPhezulu , Ukugonywa kweeMveliso eziMgangatho ophezulu , I-Gelatin Iimveliso zeeMveliso eziVimbelayo , I-Gelatin Iimveliso ezizimeleyo ezikhuselweyo